Soo-saareyaasha Xirmooyinka & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshad Xidhmo
Bacda baalka dahabka ah ee kiishka ah ee loo yaqaan 'DIY bag bag' oo ah shandado jeebka wax lagu soo galiyo
Boorsada Gacanta lagu iibiyo ee kulul (Ubax maddiibad yar) Qalabka xirxirida Bacaha Mashiinka Dharka Farsamooyinka Farsamooyinka Farsamooyinka DIY Qalabka Dharka, adeegso gacmo-sameysmo daabac leh oo saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Bacda baalka dahabka ah ee maaddada 'DIY bag' ah oo ah shaashad cusub oo ah shandad jeex jeex jeex-jeex-jeex-jeex-jeex-jeex-jeex-jeex-jeex-jaban ah
Boorsada Gacanta Lagu Sameeyo ee Kabaha lagu iibsho (baal) Qalabka Lacagta Boorsada Dharka Dharka Farsamooyinka Farsamooyinka DIY Qalabka Dharka Kabaha, isticmaal gacmo-gacmeed saddex-geesood leh, gacantu ha sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Bacaha maaddada 'DIY' ee qaabka 'DIY' ah ee boorsada jeebka afka ah ee boorsada dahabka ah ee gacanta lagu haysto suunka bacda loogu talo galay ee labada ujeeddo leh 511808
Boorsada Gacanta lagu iibiyo ee Kulul (Harbinger ee shimbiraha) Qalabka Qalabka Qashinka Lacagta Dharka Dharka Farsamooyinka Farsamooyinka Farsamooyinka DIY Qalabka Dharka, adeegso gacmo-gacmeed saddex-geesood leh, gacanta ha sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Bacaha maaddada 'DIY' ee qaabka 'DIY' ah ee jeebka afka ah ee boorsada dahabka ah ee gacanta lagu haysto suunka bacda laba-ujeedada leh
Boorsada Gacanta lagu iibiyo ee kulul (Xagaaga qabow) Qalabka xirmooyinka Qashinka Lacagta Dharka Farsamooyinka Farsamooyinka Farsamooyinka DIY Qalabka Dharka, adeegso gacmo-gacmeed saddex-geesood leh, gacanta ha sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Bacda baalka dahabka ah ee maaddada 'DIY' ee qaabka cusub ee gacanta lagu qaato ee gacanta lagu haysto suunka bacda loogu talagalay ee labada ujeeddo leh
Boorsada Gacanta lagu iibiyo ee kulul (Herb berry) Kits Coin Bag Embroidery Fabric Dharka Farsamooyinka Farsamooyinka DIY Qalabka Dharka Kabaha, isticmaal gacmo-gacmeed lagu sameeyay saddex-geesood, gacantu ha sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Bacda baalka dahabka ah ee maaddada 'DIY bag' ah ee boorsada ah qaabka cusub ee loo yaqaan 'DIY bag bag' oo gacanta lagu haysto suunka bacda laba-ujeeddada leh ee loogu talagalay
Boorsada Gacanta lagu iibiyo ee kulul (Qiiqa midab leh hal xagaa) Qalabka Xidhmada Qashinka Lacagta Mashiinka Dharka Farsamooyinka Farsamooyinka Farsamooyinka DIY Dharka DIY, isticmaal gacan-sameysid daabac saddex-geesood ah, gacanta ha sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Bacda baalka dahabka ah ee boorsada gacanta ee loo yaqaan 'DIY bag bag' oo ujeeddo laba-ujeeddo leh
Boorsada Gacanta lagu iibiyo ee kulul (twitterka shimbiraha iyo udgoonkeeda ubaxyada) Qalabka xirmooyinka Qashinka Lacagta Boodhadhka Dharka Farsamooyinka Farsamooyinka Xirmooyinka Qalabka DIY ee DIY, adeegso gacmo-sameysmo daabac leh oo saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Bacaha maaddada 'DIY' ee qaabka cusub ee boorsada jeebka afka baaldiga dahabka gacanta lagu haysto suunka bacda laba-ujeeddada leh ee loo yaqaan 'messenger bag' 511813
Boorsada Gacanta lagu Sameeyo ee lagu iibiyo Hot (dandelion) Qalabka Qalabka Lacagta Bacaha Dharka Farsamooyinka Farsamooyinka Farsamooyinka DIY Qalabka Dharka, Adeegso gacmo-gacmeed saddex-geesood leh, gacanta ha sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Bacda baalka dahabka ah ee maaddada 'DIY bag' ah oo ah shaashad cusub oo ah shandad jeebka afka laba-ujeeddo leh
Boorsada Gacanta lagu iibiyo ee kulul (Ubax ayaa ubax buuxa ka buuxa) Qalabka Qalabka Qashinka Lacagta Mashiinka Dharka Farsamooyinka Farsamooyinka Farsamooyinka DIY Qalabka Dharka, adeegso gacmeed lagu sameeyay saddex-geesood, gacantu ha sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Bacda baalka dahabka ah ee kiishka ah ee maaddada 'DIY' ah ee qaabka kiishka ah ee kiishka ah ee loo yaqaan 'DIY bag bag'
Boorsada Gacanta lagu iibiyo ee kulul (Flamingo) Qalabka Xidhmada Qadaadiic Bacaha Dharka Dharka Farsamooyinka Farsamooyinka Farsamooyinka DIY DIY Qalabka Xidhmada, isticmaal gacmo-gacmeed lagu sameeyay saddex-geesood, gacantu ha sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.
Bacda maaddada maaddada 'DIY' ee qaabka cusub ee boorsada jeebka afka baaldiga dahabka ah ee gacanta lagu haysto suunka bacda laba-ujeeddada leh ee loogu talagalay
Bacaha maaddada 'DIY' ee qaabka cusub ee boorsada jeebka afka baaldiga dahabka gacanta lagu haysto suunka bacda laba-ujeeddada leh ee loo yaqaan 'messenger bag' 511818
Boorsada Gacanta lagu iibiyo ee kulul (Gabadha dambiisha leh) Qalabka Qalabka Qashinka Lacagta ah Dharka Farsamooyinka Farsamooyinka Farsamooyinka DIY Qalabka DIY, adeegso gacmeed lagu sameeyay daabac saddex-geesood ah, u oggolow gacanta inay sameyso si aad u muujiso dareenkaaga. Dhar tayo sare leh, daabacaadda qeexitaanka sare, soo saar fudud.